अझै पनि वर्षा र बाढीको सम्भावना, कहाँ कहाँ छ ख’तरा ? – Taja Khawar
अझै पनि वर्षा र बाढीको सम्भावना, कहाँ कहाँ छ ख’तरा ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०२, २०७८ समय: १६:४०:२६
काठमाण्डौ / सोमवार देखि अविरल परेको वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले ठूलो धनजनको क्ष’ती भइरहेका छन् । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले अझै केही दिन वर्षा जारी रहने बताएको छ ।
सोमवार देखिकै वर्षाका कारण राप्ती, तिनाउ, बबई, कालिगण्डकी, भेरी र भेरीका सहायक नदी जलाधार क्षेत्रमा आज बाढीको उच्च जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै कोशी र कोशीका सहायक नदीमा पानीको बहाव सामान्य रहने अनुमान छ ।
अझै पनि वर्षा जारी रहने भएकाले जलाधारको बहाव बढ्ने भन्दै महाशाखाले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ । वाग्मती प्रदेशको काठमाण्डौसहित रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, गण्डकीको गोरखा, मनाङ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, तनहुँ, स्याङजा, नवलपुर, लुम्बिनीको परासी, पाल्पा, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया र रुकुम, कर्णालीको सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट तथा सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र आसपास भइ बहने नदी जलाधारमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
बुधवार बिहानको मापन अनुसार नारायणी र नारायणीका सहायक नदीमा बहाव सर्तकता तह आसपास रहेको पनि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हिजो सिन्धुपाल्चोकको जलबिरेमा बलेफी खोला जलमापन केन्द्रमा आकस्मिक जलसतह बढेर खतरा तह पार गरेकोमा अहिले घट्दो क्रममा छ ।
Last Updated on: June 16th, 2021 at 4:40 pm